Chii Chaunoita Kana Hupenyu Hwakaoma Dzimwe nguva? | Karman® Mawiricheya
Wese munhu anowana nguva yakaoma pane imwe nguva muhupenyu hwake. Vamwe vanogona kudzidza kubata nemamiriro ezvinhu aya vamwe vasingaite nekuda kwekushayikwa kweruzivo. Kune nzira dzakawanda dzinogona kubatsira chero munhu kukunda izvi zvakashata zviitiko. Shanduko dzakakura dzinogona kutora nguva yakareba kuti vamwe vatarisane nadzo, uye vamwe vangangokwanisa kuchinjika.
Vanhu vari muwiricheya vanogona kusangana neshungu dzekunzwa pane imwe nguva. Unogona kunge uchibvunza kuti nei usingakwanise kuita zvinhu zvinoita vamwe kana nei izvi zvaitika kwauri. Zvinogona kuita sekuguma kwenyika kune vakawanda, asi pakupedzisira vazhinji vanodzidza kuona yakajeka mamiriro ezvinhu anozovabatsira kurarama kwavo upenyu kuzere.
hwiricheya vashandisi vanogona kutarisana nevaviri mhando yeshanduko huru, yemanzwiro uye yemuviri. Aya marudzi maviri ekuchinja anoitwa nenzira dzakasiyana uye anogona kuve nemhedzisiro dzakasiyana kune mumwe munhu. Asi, zvinowanzoenda pamwe chete.
Kuchinja kwemanzwiro kwakashata uko kungaite kuti unzwe kuti urikusangana neyakaipisisa upenyu inogona kugadziriswa nekutanga kuziviswa. Edza kunzwisisa kuti chii chauri kunzwa. Kutsamwa here, kusuruvara, kana godo? Kubvunza izvi kunogona kutanga kubatsira nekuti iwe unogona kutanga kuwana kugamuchirwa uye unzwisise nzira yakanakisa yekugadzirisa aya manzwiro.
Sezvo mumwe achiongorora aya manzwiro, iwe unoziva zvinhu zvinogona kunge zvakakonzera mamiriro ako emanzwiro. Pamwe iwe unogona kunge wakanzwa kunzwa kwekusiyiwa uye kuzvidzwa, kutaurwa zvisina kukodzera, kana kubvunzwa nevamwe nezve kugona kwavo.
Kune nzira dzakawanda dzakasiyana dzinogona kukubatsira iwe kukunda mamiriro akasiyana.
Kunyora mumagazini inzira inoshamisa yekurega manzwiro achibuda nenzira ine hutano. Iyi nzira inogona kushanda sereferenzi kana iwe wakatarisana neimwe mamiriro kanopfuura kamwe. Izvo zvinokubatsira iwe kuona kuti idzi nguva ndedzenguva pfupi. Une iyo kugona kukurira aya manzwiro asina kunaka.
Imwe nzira iyo inobatsira kuyedza kutaura kushamwari yaunovimba nayo. Izvi zvinogona kubatsira kudzikamisa mabhodhoro emanzwiro uye kuwana maonero ekunze anogona kubatsira kuvandudza mamiriro acho ezvinhu.
kufungisisa zvinogona zvakare kubatsira.
Kana, iwe unogona kuzvitsausa pachako nezviitiko zvaunofarira kuita.
chisimba exercises zvakaita se mitambo or Yoga inogona kubatsira kudzikamisa pfungwa dzako nemuviri wako panguva dzinonetsa.
Shanduko dzepanyama dzinowanzo kuve nyore kukunda nekuti pane nzira dzakasiyana dzekuwana mhinduro kunyangwe rakanyanya kuoma basa. Kutsvaga yakanakisa nzira dzeku yose zuva nezuva mabasa anogona kukupa iwe kunzwa kwakasimba kwekugona.
Kushandiswa mavhiripu yakavandudza mamirioni ehupenyu achipa kuzvimirira uye kubatsira kugadzira hupenyu hwakanaka. Pane zvinhu zvakawanda izvo munhu achiri kugona kuita uye zvakanyanya zvakakosha pedzisa kunyangwe nekusiyana kwemuviri.